I-EURUSD ne-USDCHF kusenzuzo + nokuningi okuzayo - Forex Lens
Ukuthengisa & Ukusekela Ucingo: 1-888-673-9567
IFEX TRADING ROOM
UBULUNGU BOMHWEBI WESIKHATHI
Yiba ngumhwebi wePro
I-FOREX TRADING BLOG
ISIVIVINYO SOKUCHWEPHESHA KWESIFUNDA
INDLELA YOKUTHOLA UKUTHENGA
UKWAKHA ISIQEPHU SOKUTHENGA KOSUKU
UKUthola UMcebisi Wokuhweba
UKUTHOLA IBHUNGA LOKULUNGILE UKUZE UQINILE IMITHETHO
I-EURUSD ne-USDCHF kusizakala + nokuningi okuzayo
Ukuhlaziywa Kwezokuhweba kwe-Forex, Ikamelo lokuThengiswa bukhoma, Ukuhlaziya Technical
Njengoba ukuhlaziywa kwesenzo sentengo kwabikezela, womabili amasethingi wezohwebo we-EURUSD ne-USDCHF adlala njengoba bekulindelekile futhi enzuzweni. Njengoba i-Dollar uptrend ihlala iqinile, inzuzo engaphezulu kufanele ilindelwe.
I-EURUSD izithole iphansi -0.37% namuhla njengoba intengo iqhubeka nokwehla kwayo. Isandulela sokuthengiswa kwamuva kwakungukuvalwa kwentengo okungaphansi kwe-low ngesonto eledlule. Abahwebi bangalindela ukuthi intengo ibuyele emuva kancane namhlanje, ngaphambi kokugcina ifinyelele kulitshe le-1.16400.
Njengoba iDola liphusha phezulu, i-USDCHF iyaqhubeka nokukhuphuka nayo. Ngasekuqaleni kwanamuhla, i-DXY ikwazile ukufinyelela ku-93.200 futhi yavala i-bullish ngaphezulu kwaleli zinga. Lokhu kufanele kuholele ekuzuzeni okuqhubekayo kwe-USDCHF. Abathengisi bezenzo zamanani entengo yokuqala abazobe bebhekiswe kuyo ngu-0.94700.
Kusasa umbiko wokuqashwa kwe-ADP omele inani lemisebenzi engeziwe ngaphandle kohulumeni kanye nomkhakha wezolimo. Isibikezelo samanje sithuthukisiwe kusuka emphumeleni wangaphambilini lapho kulindeleke ukuthi kwengezwe imisebenzi engama-552,000 kule nyanga edlule. Umphumela omuhle ungathumela iDola nangaphezulu.
Bhalisela i Ubulungu Bamahhala.
Ngena ngemvume ku- bukela ama-webhusayithi aqoshiwe ngokuphelele egumbini lethu lokuhweba i-Forex.
Xoxa nabathengisi bethu ku Iseva Yomphakathi Wokuphikisa.
Funda ukwehlukana izolo: Ukuhlaziywa kwe-EURUSD ne-USDCHF ngeDollar Bullish
Mashi 30, 2021 /by Forex Lens Izindaba
Tags: lwemali ukuhweba, isibikezelo se-eurusd, ukuhlaziywa kwe-forex, forex coronavirus, imfundo yangaphambili, forex ukuhweba bukhoma, inzuzo ye-forex, amasignali forex, ukuhlaziywa kokuhweba kwe forex, I-Forex Ukuhweba Ibhulogi, Igumbi lokuhweba le forex, funda indlela yokudayisa i-forex, bukhoma ukuhweba kwe forex, I-US Dollar
Yabelana ngalokhu kungena
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2021/03/Forex-Lens-Youtube-Live-Forex-Trading-Room-EURUSD-and-USDCHF-in-Profit-plus-More-to-Come.jpg 720 1280 Forex Lens Izindaba https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens Izindaba2021-03-30 17:37:132021-03-30 17:38:36I-EURUSD ne-USDCHF kusizakala + nokuningi okuzayo
Ungase futhi uthanda
I-COT Report Hints Bullish Euro ne-Bearish Dollar
I-EURUSD ne-EURJPY Longs + DXY Bearisharing futhi
I-EURNZD Swing Trade Idea Yesonto Elizayo!
Ungaphinde Ulahlekelwe Ukuhweba Futhi - I-300 Pips Per Isonto Ukuhweba Isu
I-EURUSD Inzuzo Nokubalwa, I-USDJPY Short Trade Ready?
Ungayisebenzisa kanjani Izimpawu Zakwa-Forex njengethuluzi?
Ama-Shorts we-CADCHF Angenile nama-US Oil Hits + ama-200 Pips WenzuzoJuni 15, 2021 - 4: 53 pm
I-US Oil Up +150 Pips kanye Nesifinyezo Esingaba khona se-USDCADJuni 14, 2021 - 4: 35 pm
Ama-US Phezulu we-+120 Pips kanye neDollar Pushes Back Against BearsJuni 11, 2021 - 4: 40 pm
Uwoyela wase-US ubuyela emuva onyakeni ophakeme + we-CADJPY osondela ezingeni lokhiyeJuni 10, 2021 - 5: 12 pm
I-US Oil Hits Target yokuqala + I-AUDUSD Trade DayJuni 9, 2021 - 4: 20 pm
Lalela uJon Morgan kwiSiriusXM no-Andrew Krystal kuCanada Talks 167
Iseshini Ebukhoma Evumelanayo
Isisusa se Forex
Ukuhlaziywa Kwezokuhweba kwe-Forex
I-Forex Ukuhweba Ibhulogi
Ikamelo lokuThengiswa bukhoma
Joyina umphakathi wethu namuhla kwa-Discord futhi uxoxe nabathengisi bethu namanye amalungu! #LensLens https://t.co/2RRYlrnJYH
- Forex Lens (@Mafa_bavuma) April 9, 2020
Funda, ukuhweba, inzuzo
Forex Lens ihlinzeka ngezixazululo zokuhweba ze-Forex zabaqalayo nochwepheshe wabathengisi ngokufanayo. Zizwe ukhululekile ukusithumela nge-imeyili noma usishayele ngemibuzo, ukuphawula noma ukukhathazeka.
Isikhungo seCF Toronto Eaton,
I-Toronto, KU-M5G 1B1
483 Imigwaqo eluhlaza,
© Copyright - Forex Lens - Ihlo Lakho Likumamaki
Ukuthengisa kwethu kwedijithali kanye namandla kusekelwa ngabalingani bethu ku- I-Fuse Inc Yakho
Yazi ukuthi ukuhweba i-forex nokuhweba kunoma iyiphi imakethe kufaka phakathi i-crypto kunamandla okulahleka kwemali kanye nokuthola inzuzo. Musa ukuhweba ngemali ongeke ukwazi ukuyivumela. Kungenzeka ulahlekelwe yimali yakho yonke lapho uhweba njengoba kunezici eziningi ezingekho kulawulo lwakho noma ezethu. Abanye abathengisi be-forex bangakubamba unesibopho sokuhweba imali eyedlula ibhalansi yakho bese idlula i-margin. Yazi ukuthi lo msebenzi ungowakho. Forex Lens ayisho lutho nganoma yikuphi ukulahleka ongakuthola ngenxa yemisebenzi yethu, amasiginali we-forex, amasiginali we-crypto, ama-akhawunti aphethwe noma ezinye izibonakaliso zemakethe esingase sizinikeze ngezikhathi ezithile. Forex Lens izosetshenziswa njengethuluzi lokufundisa ukukusiza ubone ukuthi abathengisi bosuku abaqeqeshiwe nabathengisi bezimpunga basebenza kanjani usuku nosuku nesonto kuya kwesonto. Ngokubhalisa njengomuntu obhalisile uyavuma lokho Forex Lens ayinikezeli izeluleko zezezimali kepha kunalokho inikezela ngombono wokufunda ezimakethe. Asithatheli noma yisiphi isibopho sokuthola noma sokulahlekelwa ku-akhawunti yakho ngenxa yezimpawu zethu kanye / noma izinsizakalo noma yimiphi imikhiqizo ehlobene ne-forex kunoma amanye amawebhusayithi wethu kufaka phakathi lena.
Ukuhlaziywa kwe-EURUSD ne-USDCHF ngeDollar Bullish USDJPY Longs + DXY Ready for Next Push Ephakeme
Le sayithi isebenzisa amakhukhi. Ngokuqhubeka upheqa isayithi, uyavuma ukusebenzisa kwethu amakhukhi.
I-Cookie kanye nezilungiselelo zobumfihlo
Indlela sisebenzisa amakhukhi
Singacela ukuthi amakhukhi afakwe kudivayisi yakho. Sisebenzisa amakhukhi ukusitshela uma uvakashela amawebusayithi ethu, ukuthi uxhumana kanjani nathi, ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi wakho, nokwenza ubuhlobo bakho nge-website yethu.
Chofoza kuzihloko ezihlukene zesigaba ukuthola okuningi. Ungaphinda ushintshe ezinye zezifiso zakho. Qaphela ukuthi ukuvimba ezinye izinhlobo zamakhukhi kungathinta isipiliyoni sakho kumawebhusayithi ethu kanye nezinsizakalo esizikwazi ukuzinikela.
Amakhukhi e-Essential Webhusayithi
Lawa makhukhi ayadingeka kakhulu ukukuhlinzeka ngamasevisi atholakalayo ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu futhi ukusebenzisa ezinye izici zayo.
Ngenxa yokuthi la ma cookies ayadingeka kakhulu ukuletha iwebhusayithi, awukwazi ukuwenqaba ngaphandle kokufaka impendulo yokuthi isayithi lethu lisebenza kanjani. Ungavimbela noma ususe kuzo ngokushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho bese uphoqa ukuvimbela wonke amakhukhi kule webhusayithi.
Amakhukhi weGoogle Analytics
Lawo makhukhi aqoqa imininingwane esetshenziswa noma yifomu ehlanganisiwe ukusisiza siqonde ukuthi isetshenziswa kanjani iwebhusayithi yethu noma ukuthi imikhankaso yethu yokukhangisa isebenza kanjani, noma asisize wenze ngokwezifiso iwebhusayithi yethu kanye nesicelo sakho ukuze uthuthukise umuzwa wakho.
Uma ungafuni ukuthi silandelele i-visist yakho kusayithi lethu ungakhubaza ukulandelela esipheqululini sakho lapha:
Chofoza ukuze unike amandla / ukhubaze ukulandelwa kwe-google analytics.
Ezinye izinsizakalo zangaphandle
Siphinde sisebenzise amasevisi angaphandle ahlukile njenge-Google Webfonts, i-Google Maps nabahlinzeki bevidiyo yangaphandle. Njengoba laba bahlinzeki bangase baqoqe idatha yomuntu siqu njengekheli lakho le-IP esikuvumela ukuthi uzivimbele lapha. Sicela wazi ukuthi lokhu kunganciphisa kakhulu ukusebenza nokubukeka kwesayithi lethu. Izinguquko zizoqala ukusebenza uma ulayisha kabusha ikhasi.
Izilungiselelo ze-Google Webfont:
Chofoza ukuze unike amandla / khubaza ama-webfonts e-google.
Izilungiselelo ze-Google Map:
Chofoza ukuze unike amandla / ukhubaza amamephu weGoogle.
I-Vimeo ne-Youtube ividiyo ifakiwe:
Chofoza ukuze unike amandla / khubaza ama-embedded wevidiyo.
Ungafunda ngamakhukhi ethu kanye nezilungiselelo zobumfihlo ngokuningiliziwe ku-Inqubomgomo Yobumfihlo yethu.